Hety ambongadiny volo napetraka manapaka volo manify mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Ny hety volo dia manamboatra tadim-bolo manify
Modely ： IC-55G-1; IC-5530TG
Size: 5.5 mirefy; 30 nify
Endri-javatra: napetraka ny hety volo
Fitaovana ： SUS440C Stainless Steel
Hamafin'ny: 59 ~ 61HRC
● Ny volo fanapahana mahitsy 6.0 santimetatra dia mety amin'ny famaranana. Matetika izy io dia ampiasaina hamoronana loha bob sy loha Sassoon. Aza ampiasaina amin'ny volo fanapahana be loatra. Ny hodi-kazo mahitsy dia manana hamafiny avo, maranitra tsara, mateza ary manapaka malefaka.
● Gunting 6,0-inch, 30-nify, 20% eo ny fanesorana volo. Mety amin'ny famitana ny sombin-bolo sy ny famoronana sosona.
● Ny tadin'ny hety dia misy muffler vita amin'ny fingotra, izay afaka miaro amin'ny fomba mahomby rehefa manapaka, ka mangina ny asa. Hamarino tsara fa tsy misy tabataba natao amin'ilay mpanao volo. Ny lelan'ny hety dia ny nify "V", nify kely sy maranitra, tsy mora mikatona, ary tsy mora misarika volo.
● Ny tahony dia mandray kofehy 3D misy refy 3D, izay manamora ny fahazoana ny hery fanapahana ary mahazo aina kokoa. Ahenao ny fampiasana lava ny hety hanimba ny hatotan-tanana, ny soroka ary ny hatoka.
● Ny volom-borona avo lenta dia manamboatra tsara ny lelan'ny hety roa, ary ny volo avo kokoa dia mateza kokoa ary mety kokoa hanamboarana ny hety amin'ny hety. Ny volomaso dia tokony ahitsy amin'ny toerana mety, tsy malalaka loatra na tery loatra, mba tsy hanimba ny hety.
5.5 mirefy; 30 nify
Hety fanapahana volo misy visy ambony
Teo aloha: Hetezo manety volo manapaka hety mihety volo
Manaraka: Hety volom-bolo vita amin'ny hety 6
6.0 Professional Dragon Handdress Hairdressing Sci ...
Gunting mpanety trano ao an-trano manapaka ny volon-tany manapaka ...
Hevitra mafana amidy volo napetraka miaraka amin'ny tahony vita sokitra
Gunting mpanety volo vita sokitra volamena ...
440C Stailess vy hety mpanety ...